छुट्टी पछिको COVID-19 वृद्धि यहाँ छ: अब के आशा गर्ने - Nawalpur Dainik
छुट्टी पछिको COVID-19 वृद्धि यहाँ छ: अब के आशा गर्ने
विज्ञहरू भन्छन् कि छुट्टी पछिको COVID-19 वृद्धि आएको छ र मृत्यु र मृत्युको संख्या पनि बढाइरहेको छ।
तिनीहरू थप्दछन् कि अमेरिकाका नौ राज्यहरूमा देखाईएको नयाँ भाइरस भेरियन्टहरू अझ ठूलो कारक बनेका छैनन्, तर तिनीहरू सडकमा तल हुन सक्छन्।
विज्ञहरू भन्छन् कि छुट्टीको वृद्धिले खोपहरूको गति द्रुत पार्न कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर जोड दिन्छ।
जसरी COVID-19 केसहरू बढ्न जारी छ, देशको शीर्ष तातो ठाउँ तपाईको पहिले जस्तो राज्य नहुन सक्छ।
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरूको अनुसार (CDC), यो एरिजोनामा हो।
राज्यले प्रति दिन १००,००० मानिसमा १3१ नयाँ केसहरू औसत गर्दैछ, नजिकैको क्यालिफोर्नियालाई पछाडि पार्दै।
विज्ञहरू भन्छन कि राज्यव्यापी मास्क जनादेशको अभाव र रेस्टुरेन्ट, बारहरू र ठूला जमघटमा केही प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अब राज्यले पनि शल्यक्रियाको माथि शल्यक्रिया गर्दैछ।
“थैंक्सगिभिंगले भर्खरै ग्यासलाई आगोमा फ्याँकिदियो र वास्तवमै हामीलाई त्यो घाता .्क बृद्धि घुमाउन दियो,” एरिजोना पब्लिक हेल्थ एसोसिएशनका कार्यकारी निर्देशक विल हम्बलले भने।
“क्रिसमस पार्टीहरू र नयाँ वर्षका पार्टीहरू र सबै सामाजिक मिक्सि 10को साथ जो १० दिनको अवधिमा भयो, सँगै यसले ठूलो असर पार्‍यो,” विनम्रले हेल्थलाइनलाई भने। “पछिल्लो हप्ताको लागि, हामी शीर्ष, संसारमा सबैभन्दा खराब छौं।”
र एरिजोना हिमशिलाको टुप्पो मात्र हो।
पछिल्लो हप्तामा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रति दिन २ 246,००० भन्दा बढी नयाँ केसहरू छन्। दिन प्रति दिन ,000००० देखि ,000००० बीचको मृत्यु हुन्छ।
संख्यामा वृद्धि भनेको जनतालाई घरमै रहन र छुट्टिको मौसममा सामाजिक जमघटहरू वेवास्ता गर्न बारम्बार चेतावनी दिएपछि आउँदछ।
क्यालिफोर्नियाको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिनमा क्लिनिकल एक्सेलेन्स रिसर्च सेन्टरले क्रिसमसभन्दा ठीक अघि गरिएको सर्वेक्षणले 34 प्रतिशतले स्वीकार गरे कि उनीहरू घरभित्र भेला गर्ने योजना गरिरहेका थिए।
धेरै जना उपस्थित हुन ११ वा बढी व्यक्तिहरू हुने आशा गर्थे।
के नयाँ यु.के. संस्करण एक कारक छ?
युनाइटेड किंगडमबाट आएका कोरोनाभाइरस संस्करण, जुन वैज्ञानिकहरूले भन्छन् कि योभन्दा बढी संक्रामक छ, हालसम्म कम्तिमा नौ संयुक्त राज्य अमेरिकामा पत्ता लागेको छ।
सीडीसीले भन्यो कि हालसम्म .1 76 वटा रिपोर्ट प्राप्त भैरहेको छ जुन हालको B.1.1.7 को रूपमा चिनिने तनावका स्रोतहरू हुन्, तर वास्तविक संख्या धेरै बढी हुन सक्छ।
टेनेसीको भान्डर्बिल्ट विश्वविद्यालयमा संक्रामक रोगका प्राध्यापक डा। विलियम स्काफ्नरले हेल्थलाइनलाई भने, “हामी यस प्रकारको लागि यकिन हुन पर्याप्त परीक्षण गरिरहेका छैनौं।” “तर केहि स्थानहरूमा जहाँ उनीहरू परीक्षण गर्दै थिए, उनीहरूले यो पत्ता लगाउँदैनन् कि यो प्रभुत्वको एकदम नजीक छ। यो करिब प्रतिशत तल छ। ”
“त्यसैले यो त्यहाँ छ, परिसंचरण को लागी शुरू, तर हामी धेरै हामी सोच्छौं मामला को सिंह को हिस्सा, मानव व्यवहार संग गर्न को लागी सोच,” जोडी।
“हामीले मास्क लगाएका छैनौं, सामाजिक दूरी छैन। यो यात्रा गरिरहेको छ, परिवार प्राप्त गर्ने पार्टीहरू, ती प्रकारका चीजहरू भएको, “उनले भने।
Prevजब सूचित रहिरहन्छ तपाईलाई तनाव भइरहेको हुन्छ, यी साधारण सल्लाहहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्
NextCOVID-१९ को साथ 75% भन्दा बढी मानिस अस्पतालमा भर्ती भए6महिना पछि लक्षणहरू थिए